MY FEELINGS: 2008
အဲ့ဒီလိုပဲ နေ့ရက်တွေကလည်း မညီမညာနဲ့ ကုန်ဆုံးနေဦးမှာပါ
Posted by JULYHTET at 7:22 AM3comments:
HAPPY BIRTHDAY MY SIS
ဇန်န၀ါရီ လလောက်နဲ့တူပါတယ်။ ကျွန်တော့် FYP project က Research and Development အပိုင်းမှာပါတော့ ဆရာက ပြောတယ် ကျွန်တော်တို့ Deparment က R&D project ၂ခုရွေးမယ်တဲ့။ ပြီးရင် အခြား Department တွေက အလားတူ project တွေနဲ့ ထပ်ပြိုင်ပြီး SP ကိုယ်စားပြု ၂သင်းရွေးမယ်။ သေချာလုပ်ပါလို့ အကြံပေးပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်တို့ FYP က School of Built Enviroment ရဲ့ ကိုယ်စားပြုရွေးခံရပါတယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ SP ရဲ့ Directors တွေကို presentation လုပ်ပြီး အခြား Department က project တွေနဲ့ ပြိုင်ရပါတယ်။ အခန်းက Directors board room လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သွားကြည့်တော့ အခန်းရဲ့ ခမ်းနားချက်က ကျွန်တော့်ကို တုန်လှုပ်စေပြီး စိုးရိမ်စိတ်တွေ ၀င်လာပါတယ်။ အစကတည်းက ပြာတတ်တဲ့ ကျွန်တော့် ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာ။ ဆရာကလည်းပြောပါတယ် မျှော်လင့်ချက် သိပ်မထားပါနဲ့တဲ့ School of MM ကို ယှဉ်နိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူးတဲ့။ သူတို့တွေတော်တော် များများက prototype တွေထုပ်ပြနိုင်တယ်တဲ့။ အင်းပေါ့ R&D ဆိုမှတော့ prototype ရှိတဲ့လူပိုသာမှာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တကယ်နေ့ကို ရောက်လာပါတယ်။ လင်းထက်လည်း ပြာယာခတ်နေတာပဲ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့် project လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က အေးအေးပါပဲ ။ ကြည့်ရတာ ဘာစိုးရိမ်းစိတ်မှမ၀င်သလိုပါ။ သူက ပြာယာခတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို စကားတစ်ခွန်းပြောပါတယ်။ “ငါတို့ လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ထားပြီးပြီ။ ဘာမှ ပူမနေပါနဲ့။ မရလဲ စောစောပြီးတာပေါ့လို့ ပြောတယ်။ အေး၂ဆေး၂ သာလုပ်ပါတဲ့” ကျွန်တော်သူပြောတဲ့စကားနဲ့ သူ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ကို လျှော့ချပါတယ်။ calm down လုပ်တာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော် ကျွန်တော့်ရဲ့ SP student life တစ်လျှောက် ကျွန်တော့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး presentation တစ်ခုကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူသာ အဲ့လို့ ကျွန်တော့်ကို မပြောခဲ့ဘူးဆိုရင် လင်းထက် အရင်လို ပဲ ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့ ဖြစ်ခဲ့မှာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးအရာရာကို calm down လုပ်ပြီး ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ သူ့မွေးနေ့ပါ။ ကျွန်တော်ဒီကနေပဲ ဆုတောင်းလိုက်ပါတော့မယ်။
“အမ မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ကျွန်တော် ဒီကနေပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။”
Posted by JULYHTET at 8:28 AM No comments:
လင်းထက်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် လင်းထက်ဆိုတဲ့ ကိုယ်ထဲမှ ပျောက်ကွယ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ သူ အမှတ်မထင် ထွက်ခွာသွားတယ်။ တိတ်တိတ်လေးပေါ့။ ပိုင်ရှင်မသိတာလဲပါမှာပါ။ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ မရှိတော့ဘူး။ ခွန်အား ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးတဲ့ စိတ်ခွန်အား တစ်ခု ကို လင်းထက်က လင်းထက်ဆီက ယူပြီးထွက်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုင်ရှင်လင်းထက် သူ့ဆီမှာ ရှိတဲ့ အကြွင်းအကျန် ခွန်းအားနဲ့ ထွက်သွားတဲ့လင်းထက် ပြန်လာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ ပြန်လာပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ပိုင်ရှင် လင်းထက် ပျော်တယ်။ ဒီတစ်ခါလည်း သူ သူ့ဘာသာသဲူပြန်ထနိုင်ပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာလာတော့ ပိုင်ရှင်လင်းထက် သဘောပေါက်လာတယ်။ ပြန်လာသောလင်းထက် ကအတုကြီး။ အရင်လို့ မဟုတ်တော့ဘူး။ ခနခနလဲပြိုကျလာတတ်တယ်။ energetic မဖြစ်တော့ဘူး။ aggressive တွေ လျှော့လာတယ်။ careless အရမ်းဖြစ်တတ်လာတယ်။ Friendly မဖြစ်တော့ဘူး။ စိတ်ရှည်တတ်တဲ့လင်းထက် အနားမှာ စကားကျယ်ကျယ်လာပြောရင်တောင် စိတ်တိုတတ်လာတယ်။ မင်းဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲ လင်းထက်ရယ်။ ကြာရင် ငါပျောက်ကွယ်သွားမလားမသိဘူး။ ဟုတ်တယ်။
Posted by JULYHTET at 8:43 AM 1 comment:
နင်ဟာ ငါ့အတွက် ထူးဆန်းလှပတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပေမယ့် ငါဟာနင့်အတွက်တော့ အပြစ်အနာအဆာတွေပါတဲ့ ကာရန်မဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်တောင်မဟုတ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်
Posted by JULYHTET at 5:33 AM No comments:
မနေ့ ညက အိပ်မက် တစ်ခုမက်တယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ပြောပြချင်လို့ ဘလော့မှာတင်လိုက်တာ။
အိပ်မက်ထဲမှာ အရမ်းလှတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကို တွေ့တယ်။ချက်ချင်းလို ချင်တပ်မက်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ သွားယူ မယ်ဆိုပြီး ပြင်လိုက်တာ အလယ်မှာ ချောက်ကြီးတစ်ခု ကိုတွေ့ကော။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ရမလဲ ကြိုးတံတားတွေ ထိုးထားတော့ အဲ့ဒီကနေသွားမယ်ဆိုပြီး ကြိုးစားကြည့်တာ။ ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဗျာ အကုန် ပြတ်ကျကုန်တာ။ ဒါနဲ့ပဲ သွားလို့ကမရတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ သွားလို့ရမယ့်လမ်းရှာကြည့်တာ လေပေါ်ကပျံမယ်ဆိုပြီး စဥ်းစားကြည့်တာ ပျံမှမပျံတတ်တာ။ နောက်ဆုံးတစ်လမ်းပဲ ရှိတယ် ဘယ်လောက်နက်မှန်းမသိတဲ့ ချောက်ထဲ ကနေဆင်းပြီသွားရမှာ။ ကျွန်တော်လည်းပန်းပွင့်ကို ဆုံးရှုံမခံနိုင်တာနဲ့ ချောက်ထဲ ဆင်းသွားတာပေါ့။
Posted by JULYHTET at 8:16 AM No comments:
ပဲပလာတာ နဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်
စင်ကာပူမှာ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ပဲပလာတာ မရပါဘူးဗျာ။ မြန်မာပြည်က ပဲပလာတာ မျိုးပေါ့။ အဲ့ဒီ ဟာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော် ဒီမှာ ချောက်ချဘူးပါတယ်။ သူက ဖြိုးသီဟအောင်ပါ ။ အားလုံးလဲသိမယ်နဲ့တူတယ်။
အဲ့ဒါတစ်ရက် ကျောင်းက foodcourt 1 မှာ မနက်စာစားတော့ ကျွန်တော် က ရိုးရိုးပလာတာမှာစားတာ။ အဲ့ဒါသူရောက်ချလာပြီးတော့ သူ ပဲပလာတာစားချင်တယ်တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို နောက်ချင်တာနဲ့ “ဟိုကုလားဆိုင်မှာရှိတယ်လို့ပြောတော့ ကျွန်တော့်ကိုပါခေါ်တယ် သူက” ကျွန်တော်လည်းလိုက်သွားတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မင်းပဲမှာလို့ ပြောလိုက်တာ။ ဆိုင်လဲ ရောက်ရော မှာပါတယ်။ “bean prata” ရိ်ှလားလို့ ။ အဲ့ဒီက ကုလားမကြီးက ကြောင်ပြီးကြည့်ပါတယ်။ ဟိုကောင်ကလည်းဆက်ပြောတယ် “bean prata” ကုလားမကြီးက ပြန်မေးပါတယ် “beaf prata” လားတဲ့။ ဟိုကောင်ကလည်း ထပ်ပြောတယ် “beam prata” ။နောက်ဆုံးတော့ သူလဲ လက်လျှော့ပြီး “beaf prata” ပဲယူလာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလဲ ဆဲလိုက်တာ စုံရော။
Posted by JULYHTET at 8:10 AM No comments:
ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်တာ နောက်လ ၁ရက်နေ့ ဆို ၃လပြည့်တော့ပါမယ်။ အဲ့ဒီတော့ အလုပ်လုပ်ရင်း ရလာတဲ့ ခံစားချက်လေးတွေ နည်းနည်းရေးကြည့်ပါမယ်။
ပထမဆုံးခံစားချက်ကတော့ မနက်အလုပ်သွားရင် ဒိုဗာ အမ်အာတီကို ရောက်ရင် ကျောင်းကြီးကို ကြည့်ကြည့် ပြီး ၀မ်းနည်းသလိုလို ဘာလိုလို ညာလိုလို ခံစားရပါတယ်။ ၈နာရီ ဒိုဗာ အမ်အာတီကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၅လလောက်ကလည်းရောက် တာပဲ။ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါကကျောင်းတက်တာ။ အခုကတော့ နောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းဝန်းကြီးကို လှမ်းငေးပြီး သက်ပြင်းချရတာ လည်း ၃လပြည့် ပါပြီ။
ကွန်မွန်းဝက် အမ်အာတီ ရောက်ရင်ခံစားရတာကတော့ စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ် ။ ၁၀၅ ကို စောင့်ရတာ။တစ်ခါမှ ကွက်တိမလာဘူး။ အနည်းဆုံး ၁၂မိနစ်တော့စောင့်ရတယ်။ မုန်းတယ် ၁၀၅ ရယ်။
အလုပ်ရောက်ရင်တော့ စပါပြီ။ ဘင်ဂလားစကားသံတွေ တရုပ်စကားသံတွေ။ တစ်ခါတစ်လေစိတ်ညစ်ရတယ်။ တစ်မနက်လုံး English လို တစ်ယောက်မှပြောဘူး။ သေချင်စော်ကိုနံရော်။ တစ်ရုတ်စာပဲသင်မလားလို့တောင် စဉ်းစားမိတယ်။ အဲ့ဒီ communication ကလည်း တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ညစ်စရာကောင်းပြီ တစ်ခါတစ်လေ ကျပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ သူတို့ကို where are you going? လို့ပြောလို့ရဘူး။ You go where? လို့ပဲပြောရတယ်။ သြော် Singlish ဆိုတာ အခုမှ သေချာပြောဘူးတော့တယ်။ သူတို့ ပြောတာရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်က မေးတာပေါ့နော်။ Delivery come what time? ပြန်ဖြေတယ် ခင်ဗျ။ After တဲ့ ။ စစချင်းတော့နားလည်ဘူး။ နောက်မှသဘောပေါက်တယ်။ သူတို့ after က later နဲ့တူတူပဲဗျ။ သူတို့ဆိုတာ အလုပ်ကြမ်းသမားတွေကိုတင်ပြောတာဟုတ်ဘူ။။ တစ်ချို့တစ်ချို့ ကားအကာင်းစားကြီးတွေနဲ့ လာတဲ့ sub contractor တွေရဲ့ သူငှေးတွေလည်းပြောတာပါပဲ အဲ့လို။
စစ၀င်ဝင်ချင်း ရက်ကတော့ ရင်ကော့ပြီး နေတာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငါ စာတတ်တယ်ပေါ့နော်။ အကုန်သိတယ်ဆိုပြီး ၀င်သွားတာ။ နောက် ၃ရက်လောက်လဲ ကျတော့ သိလာပါတယ်။ ငါဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကို ဘာလာမေးမေး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မေးမေး ။ ဖြေစရာအဖြေမရှိဘူးဗျာ။ အဲ တစ်ခုတော့ ဖြေလိုက်တယ်။ I dun know လို့ ။ ဟီး ။
ဘယ်ရမလဲ လင်းထက် နောက်တစ်ပတ်ကြာတော့ အဲ့ဒီ အဖြေ ထက်တိုးတက်သွားပြီ။ I will check it လို့ပြန်ဖြေတာပေါ့။ ပိုပြီး လူအထင်ကြီးတာပေါ့နော် ဟီဟီ။
နောက်တာပါ။ တစ်လလောက်လဲကြာကော အဲ့ဒီ ထက် ပိုကောင်းသွားတယ်။ I will check it and get back to you လို့။ ပိုတော်လာပြီ။ ဟီဟီ။
နောက်တာတွေလည်းများသွားပြီ။ အဲတကယ်တော့ နောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အတည်ပြောတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လည်း ၁လခွဲလောက်ကြာတော့ အလုပ်မှာ အသားကျလာတယ်ပေါ့ဗျာ။ တစ်ရက် အေးအေးဆေးဆေး ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ကျွန်တော်သင်ခဲ့ရတဲ့ စာရဲ့ ၅ ရာခိုင်းနှုန်းလောက်ပဲသုံးရတယ်ဗျာ။ဥပမာ Drawing read တာ ကျန်တာက ။ ကိုယ် ဘယ်လောက်ကြိုးစားသလဲ။ ကိုယ်အလုပ်ပေါ်မှာ ဘယ်လောက် စိတ်ဝင်စားလဲ ပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ ခံစားလာရတယ်။ ကျွန်တော့် PM ပြောတာမှတ်မိပါသေးတယ်။ D.I.Y တဲ့။ အရှည်ကောက်ကတော့ Do It Yourself တဲ့။ ကျွန်တော့်ကို ပညာပေးတာပါ။ ကျွန်တော်အောက်မှာက Foreman ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်လိုချင်တာကိုပြောလိုက်ရင် Foreman ကအကုန်လုပ်ပေးတာကိုေ ပြာတာပေါ့။ PM က ဘာလုပ်လုပ် ကျွန်တော်လို အသစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ပြောတာပါ။ အောက်သက်ကြေ အောင်ပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော် လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော် ရဲ့ Job Scope ကိုနားလည်လာခဲ့တယ်။ Job Scope ကိုနားလည်လာလေလေ ကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့ စာတွေက သုံးလို့မရလာလေလေဖြစ်တယ်။ ဥပမာဗျာ ကွန်ကရစ်မှာ ကျွန်တော် ဘာတွေပါလဲသိတယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုဖျော်ရတယ်။ Plaster ကိုင်ရင် ဘယ်လိုဖျော်ရတယ်ဆိုတာ သင်ရိုးညွှန်းတန်းထဲမှာမပါဘူး။ ပြီးတော့ အလုပ်ထဲရောက်ရောက်ချင်း ကွန်ကရစ်လောင်းတာမှာ foreman က အောက်ဆုံးမှာ ဖော့ပြားကြီးခံလောင်းတော့ ကျွန်တော် အရမ်း စိတ်ညစ်သွာတယ်။ ဘာလို့ ကွန်ကရစ်ကို ခိုးတာလဲပေါ့နော်။ နောက်မှသိလာရတာက အဲ့လိုလုပ်မှ အောင်မှာ ရှိတဲ့ မြေကြိးဆီကို အားသိပ်ပြီးသက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးတဲ့။ အဲ့လိုမျိုး ဟာတွေအများကြီးပဲ။ ကျွန်တော်ပထမတော့ စိတ်အရမ်းညစ်တယ် ငါဘာမှမတတ်ပါလားလို့ ။ ကျောင်းမှာ Distinction ဘယ်နှစ်ခုရရ အခု ဘာမှသုံးစားလို့မရပါလားလို့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် စိတ်ကို ပြန်ဖြေရတယ်။ နောက်ဆုံးကိုယ့်ဘာသာသတ်မှတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ဒီပလိုမာ ရပြီး ဒီဂရီ မတက်ခင် နောက်ကျောင်းတစ်ကျောင်းထက်တက်တာပါလားလို့ သတ်မှတ်လိုက်တာ။ အဲ့လိုစိတ် လဲထားလိုက်မှပဲ နေတတ်သွားတယ်။ ဘာပဲကြည့်ကြည့်သင်ယူစရာကြီးပါပဲလို့။
စာမေးပွဲ လည်းရှိတယ်။ ကျောင်းမှာလို ၈ပတ်နေမှ တစ်ခါဖြေရတာဟုတ်ဘူး။ နေ့ တိုင်းဖြေရတယ်။ Sub contractor တွေလာမေးတာကို ဒိုင်ခံဖြေရတယ်။ On site ပြသနာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ စဉ်းစားရတယ်။ ဟိုလေ Open book စာမေးပွဲ ပေါ့။ ဘေးမှာ Drawing ရှိတယ်။ ရှေ့မှာ တကယ်လုပ်ရမယ့်နေရာရှိတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိသေးဘူး။ စဉ်းစားရတာပေါ့ ဖြေရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းတွေ အများကြီး အဲ့ဒီထဲကမှ အကောင်းဆုံးနဲ့ အကုန်အကျဆုံးအနည်းဆုံးကို ရွေးရတာ။ မလွယ်ပါဘူး။
ပြီးတော့ အလုပ်မှာ အရေးကြီးတယ်လို့ ခံစားရတာက ကိုယ်နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ဆက်ဆံမှုပါ။ ဆက်ဆံရေးကောင်းလေလေ ကိုယ့်အလုပ်အတွက်ကောင်းလေလေ။ သူများအလုပ်တွေတော့မသိပါဘူး။ ကျွန်တော့်အလုပ်မှာ Sub contractor တွေကို စကားရင့်ရင့်ပြောလို့ မရပါဘူး။ သူတို့စိတ်ဆိုးရင် သူတို့က ဘာမှမလုပ်ပေးချင်တော့ဘူး။ အသေကပ်တာ။ သူတို့လုပ်လို့ရရဲ့သားနဲ့ impossible ကြီးပဲပြောတာ။ အဲ့လိုဆို အလုပ်က မပြီးတော့ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နဲ့ တစ်ခါတစ်လေ လည်း အအေးလေးဘာလေး တိုက်ရတာပေါ့။ တကယ်ပြောတာပါ ကျွန်တော့်အလုပ်မှာ boss ထက် ကျွန်တော့် ရဲ့ sub contractor တွေပိုအရေးကြီးပါတယ်။
ရေးတာလဲ ရှည်သွားပါပြီ။ နောက်မှဆက်ရေးပါမယ်။ ကြိုက်ရင်ပြောပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော် ထင်တဲ့ အယူအဆတစ်ခုကတော့
“To beasuccessful person, we must be good at Human management which will not be shown or taught at school. If we fail at this, we will never beasuccessful person”
Posted by JULYHTET at 7:05 AM2comments:
Memories of High School Student's life
ကျွန်တော် post မတင်တာတော်တော်ကြာသွားပါပြီ အခုတော့ အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀ကို သတိရလို့ ရေးလိုက်ဦးမယ်ဗျာ
ကျွန်တော် ကျောင်းမှာ ၅တန်းကတည်းက အတန်းခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကို ပါလေယာ ပေါ့နော်။ အတန်းခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်း ထန်းပင်တက် လက်မှတ်ရတာပေါ့။ ရေပုံထမ်းလည်း လင်းထက်ပဲ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်လည်း လင်းထက်ပါရတာပါပဲ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အပတ်စဉ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့တုန်းက အကြောင်းပါ။ အားလုံသိတဲ့အတိုင်း အခန်းတိုင်းမှာ အသင်း၅သင်းစီရှိပါတယ်။ တစ်သင်းတစ်ရက် အခန်းတည်းတံမြက်စီးလှဲ ပေါ့။ ကျွန်တော်က အဖြူအသင်းမှာပါ။ အဲ့ဒီမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါပါတယ်။ အသားကဖြူဖြူ ။အဲ ချောတော့မချောဘူးဗျ။ ကိုယ်လုံးကအဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်တော်နဲ့ ဆိုက်တူပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ ကသူ့ကို ပေါင်မုန့် လို့ခေါ်တယ်။ သူတို့က အဲ့ဒီတုန်းက ပေါင်မုန့်ဆိုင် အကြီးကြီး ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ပေါင်မုန့်လို့ခေါ်တာ။ အဲ့ဒီနေ့က သူလည်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ထဲပါတာပေါ့။ အဲ့ သူက လင်းထက်ကို အဲ့ဒီကတည်းက အမြင်ကတ်နေတာ။ဘာလို့လဲတော့သိဘူးဗျ။ စာတော်လို့လဲ ဟုတ်နိုင်ဘူး။ အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်တော် စာအရမ်းညံ့တာ။ ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီနေ့က သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး တံမြက်စီးတွေ ဂေါ်ပြားတွေ ပြန်သိမ်းတာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာစဖြစ်တာပါ။သူက သန့်ရှင်းရေးလုပ် ကတည်းက မျက်နှာကြီးနီနေပြီ။ သိတယ်မလား အတန်းခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ သူများတွေကို အတင်းခိုင်းတာပေါ့။ သူကလည်းတင်းနေတာ ကွန်ပလိမ်းတက်လို့လည်းရဘူးလေ။ ဆရာမက ကျွန်တော့်ကို back up လုပ်ထားတာဆိုတော့။ ဒါနဲ့ အဲ့လိုပြန်လည်းသိမ်းရော ဗီဒိုတံခါးဖွင့်ပေးပြီး သူနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းကို တံမြက်စီးတွေထည့်ခိုင်းတာပေါ့။ ကျွန်တော် က လည်းဗျာ အဲ့ဒီနေ့ က ဖြစ်ချင်တော့ ကျူရှင်ကတန်းလာတော့ ထမင်းဘူးလည်းမယူလာရဘူ။ ဒါနဲ့ ပေါင်မုန့်လေး တစ်လုံး ၀ယ်လာတာပါ။ သူတို့ အဲ့လိုသိမ်းနေတုန်း ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးကို ထုတ်စားတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေတောင်စားမလားမေးလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒါ ကျွန်တော်ကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုသဘောပေါက်သွားလည်းမသိဘူး။ “နင် ငါ့ကို မရိနဲ့တဲ့ဗျာ”. သြော်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကတည်းက ပေါင်မုန့်လို့ ခနခန ခေါ်နေတာကို။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း “နင်မဟုတ်ရင် မနာနဲ့” လို့လည်းပြောလိုက်ကော မျက်နှာကြီးနီပြီး မျက်ရည်တွေ ကျလာတယ်ဗျာ။ ပြီတော့ ဆရာမကိုသွားတိုင်တယ်။ သေရာ။ အဲ့ဒီနေ့ က ဆရာမကိုဘယ်လိုမှရှင်းပြလို့မရဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ လင်းထက် ၃ ချက်တိတိ ကြိမ်လုံးနဲ့ ဆော်ခံရပါတယ်ဗျာ။ ။
(မှတ်ချက်။ ။ ဆရာမကနောက်နေ့ကျတော့ပြောပါတယ်။ဟိုကောင်မလေးအငိုတိတ်အောင်ပါတဲ့)
Posted by JULYHTET at 7:53 AM2comments: